Creative Writing » ငါးဒုက္ခ@ငါးရာဇဝတ်သား	26
Mr. MarGa says: ပုံထည့်မထားလို့ တော်သေးရဲ့
lu lu says: စိတ်ပူနဲ့ ပုံ ထည့် ပေးဖို့ ကြိုးစားနေပြီ
Mr. MarGa says: တော်သေးရဲ့ ဗိုက်ဆာချိန်မဟုတ်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: သြော် ငါးး ဒုက္ခ ဖတ်ရင်းးး
Wow says: ကြောင်ရီးတွေ့ရင် စားချင်သီ ပြောအူးမှာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinn Z says: ဟိုနေ့က ဟိုဂလုထဲ…. အဲ့ ငါးဒုက္ခဆိုတာကြီး ပုံလာပြကတည်းက.. အံ့အောပြီး…မေးနေမိသေး…
အဲဒီပုံထဲက ငါးတွေကို ကြည့်ပြီး… စားချင်သလိုလို မစားချင်သလိုလို ဖြစ်နေတာ… လူဒုက္ခ ဆိုပြီး ဖွေးဖွေးကို ကြော်စားလိုက်ရ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: စားရဲ လို့ လားးး
Alinn Z says: .ဖွေးဖွေးဆိုရင်တော့..အစိမ်းလိုက်လေးသာ…စားချင်သာ….
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒီငါးဟင်း ကို ကြားဖူးဒယ် ..
lu lu says: အင်းသူ ယူရင်ပိုကောင်းတယ် အံစာ ရေ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အွန်းလေ.. အင်းသူကို ယူပြီး ချက်ကျွေးခိုင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 10
lamin ngel says: ရှမ်းအစားအစာအကုန်ကြိုက်တယ်။အင်းသားသူငယ်ချင်းရောအင်းသူသူငယ်ချင်းလဲရှိခဲ့ရတော့အင်း
lu lu says: အင်းထဲ မှမဟုတ်ပဲ အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်စားလို့ ရပါတယ်
Ma Ma says: မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သားတွေရဲ့ ငါးတုတ်ကြော်နဲ့ဆင်တယ်ပြောရမယ်။ ငါးတုတ်ကြော်ဆိုတာက………..
ရှယ်ပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: စားဖူးတယ် ငါးဒုက္ခမှန်းတော့မသိဘူး။ အဲ့လိုထပ် ငါးသံပုရာပေါင်းတို့ တံငါသည်ဟင်းတို့ ပိုသဘောကျမိတယ်။ အဲ့လိုငါးကိုကြေ်ာပြီး အနှစ်နဲ့ပြန်ဖုံးတာရှိသေးတယ်နော်။ ပင်လယ်စာကတော့ အကုန်ကြိုက်တယ်။
မြစပဲရိုး says: . တောင်ကြီးမှာတုန်းက ငါးဖိန်း ချက်ကျွေးတုန်း က “အင်းသားသေ ငါးဖိန်း ,ငါးဖိန်းသေ အင်းသား ” အဲဒီ စကားကြားပြီး မစားချင်ခဲ့ဘူး။
ကျေးဇူးဘဲ လုလုရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: ဟီးးဟီးး ခုလို ဒါ့ပုံကိုလာစားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း
Courage says: ဟင်းတွေထဲမှာ အဲ့ ဒုက္ခ အမည်ခံထာတဲ့ ငါးဒုက္ခတို့ အမဲဒုက္ခတို့ဆို အရမ်းကြိုက်။
lu lu says: လူ တွေကလည်းး ဒုက္ခဆို အတော်ကြိုက်ကြတဲ့ပုံပဲ
ဦးကြောင်ကြီး says: လူ့မကို အဲလို ဆားခြင်လိုက်ထှာ…
Mike says: .ငါးဒုက္ခ…စားကောင်းမဲ့ပုံပဲ
Ma Ei says: သေပီးငါးကတော့ ဒုက္ခရောက်မရောက်မသိ
lu lu says: ဟုတ်ပါ့ တနေ ကုန်တဲ့ ဟင်း
naywoon ni says: ငါးဒုက္ခ ဆိုလို့ ပုဒ်​မ ၅ လား ဘာလား​ပေါ့ ။ ဖတ်​စကလည်း အင်း ပုတ်​မ ၅ ​တော့ မဟုတ်​ဖူး ​ပေါ့​လေ ။ အဲ့ ငါး ဒုက္ခ ဆိုတာကို ငါးခူတို့ ငါးရံ့တို့လို ငါးပဲလား ဘာလား ညာလားနဲ့ ပြီး​တော့မှ ငါးအဆာသွတ်​ကို​ပြောတာကိုး ။ အဆာသွတ်​​ကြော်​ကို အလုပ်​ရှုပ်​လို့ လုပ်​မစားဖြစ်​ဖူး ။ ငါးဖုတ်​​တော့ အရက်​နဲ့ မြည်းဖူးတယ်​ ။ ​ချောင်းနံ​ဘေးမှာတင်​ ဖမ်းမိလာတဲ့ ငါးလတ်​လတ်​ဆတ်​ဆတ်​ကို ရွံ့နဲ့အုံပြီး မီးဖိုနဲ့ ဖုတ်​တာ ။ ရွံ့​တွေ​ခြောက်​သွားတာနဲ့ ရွံ့​တွေ​ပြောင်​​အောင်​ခွာ အ​ပေါ်ယံက ငါးအ​ကြေးခွံက ရွံ့နဲ့ကပ်​ရက်​ပါသွား ။ သံပုရာရည်​​လေးညှစ်​ပြီး စားရတာ ။ အဲ့ မြည်းရတာ တစ်​ကယ်​​ကောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: ကျန်းးးးးးးးး